Kiobà: Ny Toetry Ny Zon’olombelona · Global Voices teny Malagasy
Kiobà: Ny Toetry Ny Zon'olombelona
Voadika ny 29 Mey 2012 11:24 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Dansk, Français, English
Nahatonga ny mpamahana bolongana haneho hevitra ny fangataham-baovao vao haingana nataon'ny Vaomieran'ny Firenena Mikambana Manohitra ny Fampijaliana mikasika ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao Kiobà.
Nilaza ny bilaogera am-pielezana Uncommon Sense fa “mendrika ny hotehafana ny nataon'ny vaomieran'ny Firenena Mikambana manohitra ny fampijaliana dia lavitra ny fahalalana ny tantara marina aza raha ny momba ny fifikirana amin'ny didy jadon'i Castro tompon'andraikitra nandritra ny 50 taona mahery tamin'ny famaizana no resahina…” Nahoana, tena izany ve? Satria izy no nahatonga ny governemanta Kiobàna nandà fa “nohenjehina sy nosaziana ny rehetra noho ny fampiasainy ny zony, toy ny zo haneho hevitra sy ny zo hamorona fikambanana” – izay novalian'ilay mpamahana bolongana toy izao:
Tsy nisy olona, ankoatra ireo gadra politika an'arivony taloha sy ankehitriny, nampahorian”i Castro satria nampiasa ny zony avy amin'Andriamanitra izy ireo.
Tsy nisy olona, ankoatra ireo mpikatroka izay nanao sorona ny tenany isan'andro izay nampiasa ny zo kely ananany mba hiadiana fa afaka hifaly hampiasa ny zony malalaka ny mpandimby azy ireo indray andro any.
Tsy nisy olona, ankoatra ireo Kiobàna, tahaka an'i Zapata sy Villar, izay tsy niloa-bava nandritra ny fotoana maharitra, ary novonoin'ny fitondran'i Castro noho ny fandrahonana azy ireo, sy ny ezaka nataon'izy ireo tamin'ny zo, nametraka ny fijoroan'ny didy jadona.
Te hijoro eo anatrehan'izao tontolo izao ity fitondrana didy didy jadona ity ary handà ny tsy azo lavina, porofo ampy tsara anefa ny valin'ny fanadihadiana farany nataon'ny ONU tao Kiobà, miaina anaty tahotra i Castro ankehitriny satria tsy ho ela dia hirodana ny fitondrany.
Tsy manaiky ireo tatitra roa samihafa ny fijerin'ny governemanta Kiobàna, ny iray avy amin'ny Departemanta-panjakana Amerikana (Etazonia) ary ny iray hafa avy amin'ny Amnesty International, tatitra mikasika ny zon'olombelona ao amin'ny nosy. Havana Times nibilaogy mikasika ny fijerin'ny Amnesty:
Araka ny fijerin'ny Amnesty, mbola manohy ny famaizana ny fahalalahana haneho hevitra, ny fikambanana sy ny famoriam-bahoaka ny governemanta Kiobàna, an-jatony ireo voasambotra ary nisy ireo notazonina tany am-ponja, na dia teo aza ny famoahana vao haingana ireo gadra 11 noho ny fanehoan-kevitra, gadra efa nanomboka tamin'ny taona taona 2003, sy toy ireo gadra politika hafa 62, izay efa nigadra hatramin'ny taona 1990 ny sasany tamin'izy ireo.
Naneho ny tsy fankasitrahany ny fahirano ataon'i Etazonia ihany koa ny ny ONG mpiaro ny zon'olombelona izay voarara tsy hiditra ao amin'ny firenena nanomboka tamin'ny taona 1990, ary nanasongadina ny voka-dratsin'izany fahirano izany eo amin'ny toepfahasalaman'ny mponina ao Kiobà, indrindra ireo vondrona somary sahirana.
Nandritra izany, Notes from the Cuban Exile Quarter, namoaka ny “fanambarana diso anankiroa (amin'ireo hafa be dia be) nataon'ny fitondrana Castro tamin'ny Vaomiera Manohitra ny Fampijaliana”:
Fanambarana diso voalohany, ny fanambarana fa “tsy tafiditra araka izay neken'ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana tamin'ny 9 desambra 1998 araka ny andininy faha-3 momba ny Fanambaran'ny Mpiaro ny Zon'olombelona ireo olona voatonona ireo.
Ny Lohataona Mainty Kiobàna 2003 izay nahatonga ny ankamaroan'ny mpikarakara ny Tetikasa Varela, fandraisana an-tanana nitady ny hampifanitsiana ny lalampanorenana kiobàna amin'izao fotoana izao hifanaraka amin'ny fanajana ny zon'olombelona iraisam-pirenena, nampidirina am-ponja sy nohelohina tambabe nandritra ny fitsarana kimaimaika hatramin'ny famonjana 28 taona nefa nanao izany araka ny zo eken'ny Lalampanorenana. Voaporofo miharihary fa diso ny fanambarana nataon'i Rafael Pino Bécquer araka ny fanenjehana izay voamarika etsy ambony sy ny raharahan'ireo mpisintaka maro migadra noho ny fampanajana ny jadona politika fotsiny ihany.
Fanambarana diso faharoa, milaza ny solontenan'ny fitondrana fa misy manova ho fanakorontanana ny zavamisy. Mandritra izany fotoana izany, nasain'ny fitondrana amin'ny fomba ofisialy ny Mpampakateny Misahana Manokana Momba ny Fampijaliana Ao Amin'ny Firenena Mikambana tamin'ny 28 Janoary 2009 fa mbola tsy mifanara-kevitra amin'ny fotoana anaovana izany fitsidihana ny fitondrana jadona. Nangataka alalana hitsidika ny nosy sy hijery ny toe-draharaha ahafahany manao fehin-kevitra azy manokana ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona iraisampirenena, saingy nolavin'ny fitondrana Kiobana avokoa izay mety ho alalana rehetra. Miankina amin'izay lazain'ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona miasa anatiny sy ivelan'i Kiobà saingy haratsiana sy endrikendrehin'ny fitondrana jadona ireo.
Mety miandry ny valinteny ny Firenena Mikambana sy ny fikambanana manara-maso ny zon'olombelona, saingy tsy mitsahatra ny manasongadina tranga-na fanenjehana sy fampijaliana ny bilaogera any am-pielezana.
Ny hajian-tsary miasa amin'ity tsanganana ity, “United Nations”, (Firenena Mikambana) avy amin'i Christopher Chan, alalana an Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) Creative Commons license (tsy azo amidy- tsy azo ovaina). Tsidiho Christopher Chan ao amin'ny flickr.
5 ora izayBarbady
3 andro izayJamaika
Neken'i Jamaika tamin'ny fomba ôfisialy ny fiainana sy lova napetrak'i Mary Seacole, mpanampy mpitsabo fantadaza nandritra ny ady
Ho lasa ‘Lova Iraisampirenena’ ao amin'ny UNESCO ve ilay “tanàna naditra indrindra” tao Jamaika?